トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Pachinko modely misafidy ao amin'ny ady sy ny fomba specs
Ny pachinko milina, dia misy zavatra antsoina hoe spec. Spec sady toy ny numeric zava-dehibe izay maneho ny mety ho ny jackpot. Pachinko ny fepetra arahana, dia sokajiana ho karazany telo lehibe. Ao amin'ny karazana jackpot mety dia antsoina hoe miaraka amin'ny iray na maromaro amin'ny avo-spec feno spec ny 360 minitra, ny tsara fanahy atao hoe ny 300 minitra ny 1 aloha sy aorian'ny afovoany karazana spec mazava middleweight, ny faran 'ny taloha sy taorian'ny 1 of 100 minitra Amadeji na Dejihane-Yu Pachi antso izay isan-karazany, fa efa voasokajy mitovitovy zaraina ho karazany telo. Ny lehibe kokoa ny isan'ny
mety, tsy namely tena, dia ho fa sarotra ny voa.
avy amin'ny karazana fepetra arahana isan-karazany, dia ny mieritreritra fandikan-teny modely ny fandresena. Raha niresaka ny Win modely, mbola misy mipoaka herin 'ny payout dia ho ny zava-misy fa ny fifandraisana Chan mora ny modely. Noho izany, eo amin'ny raharaha izay tianao be dia be ny fandresena, mazava ho azy dia avo-spec kevitra. Ny mety dia avo minitra, fa sarotra hira, satria ny hery mipoaka efa natao avo noho ny hafa specs, hahazo mety ho ambony kokoa noho ny spec.
Na izany aza, avo-doza, satria dia fiverenana avo, raha ny tanjona dia avy, koa mila ny fomba fampiasam-bola manokana. Ankoatra izany, ao amin'ny modely antsoina hoe vao haingana miady Matetika karazany, modely amin'ny malaza, lasa ianao na dia mety amin'ny ankapobeny dia mihamaro amin'ny avo-spec sy afovoany specs karazana. Mba handresy, fa amin'ny lafiny sasany ihany koa dia nitaky fiomanana ny fampiasam-bola, enga anie ny sehatra ny mifidy, dia mety hahatakatra aza tsy Dalian Chang fampiasam-bola.
Ankoatra izany, te-handresy, raha toa izay be lalao lehibe te ho any amin'ny iray ka hatrany mandresy fa mampahory, tsara sy hifidy ny specs afovoany. Ary ny singa ny singa sy ny milalao ny fandresena, tsara hankafy fotsiny, dia spec io. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, dia nivoaka modely sasany, antsoina hoe ST milina, dia misy ihany koa ny karazana izay mankafy ny sasany ambaratongam-mampangitakitaka.
Ankoatra izany, dia afaka manantena mitohy ihany koa ny Chang. Ary, ireo izay mihevitra fa tokony Manontany tena aho hoe, na mitaona kely ary milalao be, Dejihane no soso-kevitra. One Times ny payout dia kely, fa misy koa ny baolina avy ao ampy mahagaga raha fifandraisana amin'ny Chang. Fampiasam-bola vola dia ny hatsarany ny specs noho izay rehetra mety ho ambany izy.
Tamin'izany fomba izany, dia milaza fa Win categorically modely ny mifidy, ny zavatra tianao ny karazana fomba handresena, ny modely ho voafidy efa niova be. Ohatrinona no tianao mba hahazoana, koa dia mbola hisy fiantraikany satria tena ny fandidiana na ny fotoana mba handray.
Mazava ho azy fa ambany jackpot azo inoana, satria ny zava-misy ambony maharitra lalao ny modely dia manokana fotoana famaranana mety, dia misy ihany koa ny zava-misy fa hifarana ihany no mifanentana tanteraka, toy ny mpiasa birao rehefa avy niasa dia . Ny modely dia kely (mazava ho azy, dia misy koa ny azo atao ny handresy lehibe mba hamerina izany andro maro, tamin'ny farany Ahoana no ... converge in)
fampiasam-bola mety, malemy kokoa mipoaka herin 'ny payout, ny fampiasam-bola vola, maodely fa misy mety ho maro, noho ny herin 'ny mipoaka payout, dia ny hoe iray ihany koa voatifitra fitsimbadihan-. Raha izany specs tsy mahafantatra tsara, noho izany dia voatanisa amin'ny an-tsipiriany ao amin'ny gazety toy izany amin'izao fotoana izao, alohan'ny handehanana hilalao, dia mety ho tsara ho anao namaky ny teny tao amin'ny filaharan'ny boky. Maodely fa misy mety ho maro, noho ny herin 'ny mipoaka payout, dia ny hoe iray ihany koa voatifitra fitsimbadihan-. Raha izany specs tsy mahafantatra tsara, noho izany dia voatanisa amin'ny an-tsipiriany ao amin'ny gazety toy izany amin'izao fotoana izao, alohan'ny handehanana hilalao, dia mety ho tsara ho anao namaky ny teny tao amin'ny filaharan'ny boky. Maodely fa misy mety ho maro, noho ny herin 'ny mipoaka payout, dia ny hoe iray ihany koa voatifitra fitsimbadihan-. Raha izany specs tsy mahafantatra tsara, noho izany dia voatanisa amin'ny an-tsipiriany ao amin'ny gazety toy izany amin'izao fotoana izao, alohan'ny handehanana hilalao, dia mety ho tsara ho anao namaky ny teny tao amin'ny filaharan'ny boky.